မောင်ရစ် - ကိုဗစ်ဆယ့်ကိုး အပိုင်းအစများ - ဧပြီ ၂၀၊ ၂၀၂၀ - MoeMaKa Media
Home / Community / Coronavirus / Experience / Maung Yit / USA / မောင်ရစ် - ကိုဗစ်ဆယ့်ကိုး အပိုင်းအစများ - ဧပြီ ၂၀၊ ၂၀၂၀
မောင်ရစ် - ကိုဗစ်ဆယ့်ကိုး အပိုင်းအစများ - ဧပြီ ၂၀၊ ၂၀၂၀
(မိိုးမခ) ဧပြီ ၂၀၊ ၂၀၂၀
မည်းမည်းမြင် လက်ညိုးထိုးချင်တဲ့ ကိုဗစ်၁၉ ကပ်ကာလကြီးထဲမှာ ...
ကိုဗစ်က သဘာဝလား သိို့မဟုတ် လူလုပ်တာလား ဘယ်လိုယုံကြည်သလဲ ...?
ဒီမေးခွန်းက သန့်ဇော်ဦး မေးတာပါ။ မေးခွန်းတွေ ငြင်းခုံတာတွေ သဘောထားတွေ ဆွေးနွေးတာတွေ အတော်ကို လက်ခံရရှိပါတယ်။ ကိုဗစ်၁၉ရဲ့ ဗဟိုချက်က အခုဆို အမေရိကန်ဖြစ်နေတော့ စိတ်ဝင်စားကြတာပေါ့။
သဘာ၀မဟုတ်ရင် လူလုပ်တာဆိုတော့ တရုတ်ပြည်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ တရုတ်လုပ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးလို့များ ဆိုချင်လို့လားမသိ။ သည်လိုမျိုး conspiracy (လုပ်ကြံဇာတ်ခင်း) တာတွေ လူတွေက အတော်ကြိုက်ကြတယ်။
တရုတ်ကိုယ်တိုင် သည်ကိုဗစ်၁၉ကို အတော်ကို ဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ ဖြေရှင်းလိုက်ရတာကတော့ မြေပြင်မှာ ထင်ရှားတဲ့ အချက်ပါ။ ကပ်ဘေးဆိုတာကလည်း ကမ္ဘာမှာ ဖြစ်နေကြ။ အီဘိုလာ၊ ဆားစ်၊ မားစ်၊ ဒါတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ သည်မျိုးဆက်သစ် ကပ်ကို ကြုံဖူးပြီ။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဖြေရှင်းမှုကိုလည်း တွေ့ခဲ့ပြီ။
တရုတ်က ၂လ အတွင်း သန်းထောင်ချီတဲ့ နိုင်ငံမှာ ကပ်မဆိုက်အောင် ဖြတ်တောက်ဖြေရှင်းလိုက်နိုင်တယ်။ ဒါဟာ အဓိက အချက်ပဲ။ ဒါကို အသိအမှတ်ပြုလိုက်နိုင်ရင် (လူလုပ်တာတွေ) (သဘာ၀တွေ) ဆိုတာထက် ၂၁ ရာစုမှာ လူတွေနဲ့ ကပ်တွေ တိုက်ကြတဲ့အခါ အရင်တုန်းကလို အရှုံးနဲ့ ဇာတ်သိမ်းစရာမလိုဘူး၊ အနိုင်ပြန်ယူနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အားတက်စရာ မှတ်ချက်ကို ရနိုင်ပါတယ်။
အဲသည်တုန်းက မြန်မာပြည်ကို ဘာလို့မကူးဘဲ အမေရိကားတို့ ဥရောပတို့ကို ခုန်ကူးရတာလဲလို့ စောဒက တက်ကြပြန်ပါတယ်။ တရုတ်က ကိုဗစ်၁၉ကို ၀ူဟန်မှာတင် အမှန်တကယ်ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက် နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာရဲ့ သက်သေပေါ့။ ပီကင်း ယူနန် ပြိုလဲမသွားဘူး။ အာရှတိုင်းပြည်တွေကို တစုံတရာ ကူးစက်ဖြတ်ကျော်သွားသော်လည်း အာရှနိုင်ငံတွေက စောစောစီးစီး ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုကို အစွမ်းကုန်လုပ်ကြတယ်။ အနိုင်ယူလိုက်နိုင်တယ်။
ဒါဆို အနောက်နိုင်ငံတွေ ထိခိုက်ကုန်ရတာလဲ? ၀ူဟန်ကနေ ခရီးသွားတွေကတဆင့် အရှေ့အနောက် အကုန် ပြန့်သွားနိုင်ပါတယ်။ ပြန့်လည်း ပြန့်တယ်။ travel hub ခရီးသွားထူထပ်နေရာမြို့၊ လေယျာဉ်၊ သင်းဘော၊ ဟိုတယ်၊ စီးပွားစက်မှုဇုံတွေ အဓိက ကူးစက်တယ်။ နောက်ကျပြီးမှ ပြန်တိုက်ခိုက်ရတော့ အကျအဆုံးများသွားတယ်။ ပြင်ဆင်မှုလည်း အားနည်း ခုခံမှုမှာလည်း အင်အားဖြည့်တင်းမှု မတင်းရင်းတော့ အထိပိုနာတယ်။ သည်တော့ အနောက်နိုင်ငံဘက်မှာ ကိုဗစ်၁၉က ပြန်ပြီး အင်အားစုပြီး အရှေ့နိုင်ငံတွေဆီ ဒုတိယထိုးစစ်လှိုင်း ဆင်နွှဲတဲ့အထိ အခုပြန်ဖြစ်တယ်။ သည်တခါ မြန်မာပြည်လည်း အနောက်ခရီးသည်တွေကနေ အကူးခံရပါတယ်။
တရုတ်က အပြင်လူမဝင်ရ၊ အတွင်းလူမထွက်ရ ဆိုပြီး တစိုက်မတ်တတ် တွန်းလှန်တာပါ။ အနောက်နိုင်ငံတွေကတော့ ကိုဗစ်၁၉ အပြင်းအထန် ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ ကာလမှာတောင် စိုက်လိုက်မတ်တတ် ပြန်ခုခံဖို့ သံန္နိဌာန် မပြင်းတပြင်းနဲ့ အချိန်ကော အရင်းအနှီးကော အားနည်းခဲ့တာ သက်သေပါ။ အခုုသည် ဒဏ်ကို တမ္ဘာလုံး ခံနေရပါပြီ။ တရုတ်လည်း သူခံရတုန်းက ပိတ်ဆို့ ဖြတ်တောက် ကာကွယ်ပေးခဲ့ပေးသော်လည်း အခု နောက်တကျော့ ပြန်ဝင်လာတဲ့ ကိုဗစ်၁၉ ကျုးကျော်စစ်ကို မပေါ့သောသတိနဲ့ ပြန်လည် ပိတ်ဆို့ဦးမှာကတော့ သေချာပါတယ်။
WHO က တရုတ်အားကိုး ပုဆိန်ရိုး မဟုတ်လား၊ သူ့ဘက်က ပေါ့ဆလို့ အခုလို ဖြစ်ရတယ်မဟုတ်လား ? သည်လိုမေးခွန်းကလည်း နောက်ကလိုက်ပါတယ်။ WHO က နိုင်ငံလည်း မဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံစုံက ဖွဲ့ထားတာ။ သူတို့မှာ politics တွေ အများကြီးပဲ။ သည်ကြားထဲက နေ့စဉ် press briefing ပေးခဲ့တယ်။ mask တတ်ဖို့ မလိုဘူး ပြောခဲ့တာကိုပဲ ထောက်ပြမနေသင့်ပါ။ မပြောလည်း အာရှကတော့ mask တပ်တာပဲ။ သူတို့ သမိုင်းပေးအသိရှိတယ်။ တရုတ်မှာလည်း တပ်နေကြတာပဲ။ အနောက်နိုင်ငံတွေဆီမှာ မလုံလောက်လို့မတတ်နိုင်ကြတာဆိုတာ တကယ်ကပ်ဆိုက်တော့ ထင်ရှားလာတယ်။ နောက်ဆုံးတနေ့ လွန်ခဲ့တဲ့ တပတ်ကမှာ mask တပ် (ချင်လည်း) တပ်ကြဆိုတာမျိုး အမေရိကန်က ထုတ်ပြန်တယ်။ WHO လည်း အစွမ်းကုန် အာရှ အာဖရိက အမေရိက ဩစတြေးလျ တိုက်ပေါင်းစုံ လိုက်လုပ်ပေးနေတာပဲ။ သူမရှိရင် ဘယ်သူမှ သွားလုပ်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ နှစ်ရာစု ထက်ဝက်ကျော် သက်တမ်းရှိတဲ့ နိုင်ငံစုံ ဝင်ထားတဲ့ WHO UN UNICEF ကုလသမဂ္ဂအခန်းကဏ္ဍကို ကပ်ဘေးကာလ စစ်ဘေးကာလမှာ ထိုးချလို့ မသင့်ဘူးဆိုတာ လူကြီးလူကောင်းတိုင်း သိတယ်။ အပြစ်ပြောချင်ရင်တော့မှ သင်ခန်းစာယူချိန်ရောက်မှ ပြောရမှာ၊ မိုးထဲလေထဲ အတူရုန်းကန်နေချိန်မှာ မလုပ်သင့်သေးဘူးလေ။
အမေရိကားမှာလား ... အိမ်သာသုံးစက္ကူ မလုံလောက်ဘူး၊ mask လည်း မလုံလောက်ဘူး၊ test kit လည်း မလုံလောက်ဘူး၊ အသက်ရှုစက်လည်း မလုံလောက်ဘူး၊ အလုပ်လက်မဲ့ထောက်ပံ့ငွေလည်း မလုံလောက်ဘူး၊ ဆေးရုံ ဆရာဝန် သူနာပြုလည်း မလုံလောက်ဘူး၊ အဲသည်မလုံလောက်တဲ့ ဆေးဝန်ထမ်းတွေကိုတောင်မှာ အကာအကွယ် PPE ပေးဖို့တောင် မလုံလောက်ဘူး။ ကြိုတင် ပြင်ဆင် ကာကွယ် တွန်းလှန်ဖို့လည်း မလုံလောက်ခဲ့ဘူး။ သည်တော့ အမေရိကန်တချို့က အပြစ်တင်ဖို့ လိုက်ရှာကြတာပေါ့။ သမတကြီးထရန့်မှာ လုံး၀ အပြစ်မရှိဘူးဆိုရင် အပြစ်ရှိတာက တရုတ်နဲ့ WHO ပဲ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။
ကိုဗစ်၁၉ ကိုလည်း အပြစ်တင်ကြရမယ်။ ကိုဗစ်၁၉ မတိိုင်ခင် ကိုဗစ်၁၈ ဘ၀တုန်းက ဘာလို့ မသိခဲ့ကြတာလဲ ။ ၁၈တုန်းကတည်းက သိခဲ့ရင် ၁၉ဖြစ်လာပြီဆိုရင် အနိုင်ချနိုင်တာပေါ့။ မှန်းစမ်း ကိုဗစ် ၁၈ဆိုတာ အရင်သမတ အိုဘားမားတုန်းက ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာ နေမှာ။ အိုဘားမား မပြောခဲ့လို့ ကိုဗစ်က ၁၈ကနေ ၁၉ ဖြစ်လာတာ။ အိုဘာမားကိုလည်း အပြစ်တင်ကြ။
ခင်ဗျားတို့လည်း အိမ်ပြင်သိပ်မထွက်နဲ့ အပြစ်တင်ခံနေရမယ်။ မည်းမည်းမြင် လက်ညိုးထိုးချင်တဲ့ ကိုဗစ်၁၉ ကပ်ကာလကြီးထဲမှာ ...
မောင်ရစ် - ကိုဗစ်ဆယ့်ကိုး အပိုင်းအစများ - ဧပြီ ၂၀၊ ၂၀၂၀ Reviewed by MoeMaKa on 4:56 AM Rating: 5